‘सत्ताधारी गठबन्धनले दोलखामा यसरी गर्यो सत्ताको दुरुपयोग, बुथकब्जा र धाँधली’ शनिबार, जेठ ७, २०७९
‘गठबन्धनलाई पहिलेनै जितेका हौं, यो पटक थप शक्तिका साथ सबै स्थानीय तह जित्छौं’ शुक्रबार, चैत २५, २०७८
बढ्दो संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ती र जिम्मेवार नागरिकको भुमिका आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
गतिशील सहरको समाजशास्त्र आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
संकटपुर्ण जैविक विविधता र मौलिक संस्कृति संरक्षणमा युवाको भुमिका सोमबार, कात्तिक ८, २०७८
किराँत धर्मसँग थामी समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्ध र आधार सोमबार, असोज ११, २०७८
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका समस्या र राज्यको दायित्व सोमबार, असोज ४, २०७८
डा. वावुराम भट्टराईलाई आप्रबासी श्रमिकको खुल्ला-पत्र तपाईंकै शब्द सापटी लिएर देशलाई सिङ्गापुर बनाउने मन छ भने एम.सी.सी. परियोजना संसदबाट पास हुनुपर्दछ, नत्र भने देश गरिवनै रहनेछ । बिना कुनै उक्साहट, बिना कुनै स्वार्थ, बिना कसैको सुझाव । बस केवल देशप्रेमि भावना मात्र । उमेरमा तपाई मेरो पिताजी सरह । तपाईको अध्ययन, भोगाई, अनुभव र योगदानको अगाडि म त केवल एक अबुझ बच्चा । केवल केहि समय सिङ्गापुर रहेर त्यस देशको बारेमा थोरै वस्तुगत अध्ययन गर्ने मौका मिलेकोले मात्र तपाई समक्ष प्रस्तुत हुने कौतुहलता जागेर आज यो खुलापत्र लेख्दैछु । शुक्रबार, असोज १, २०७८
थामी समुदाय कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गर्न नसक्नुको कारण, सम्भावना र चुनौती नेपाल थामी समाज, जिल्ला कार्य समिति, दोलखाले मिति २०७७ साल चैत्र ७ गते आयोजना गरेको संस्थागत सुदृढिकरण र भावी कार्य योजना सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मलाई पनि निमन्त्रणा गरी सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । सोही कार्यक्रममा समितिले पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको र सोही पुस्तकको लागि लेखहरु संकलन गर्ने जानकारी गराएको थियो । सोमबार, साउन २५, २०७८
बाँच्नै मुस्किल बनाउने हाम्रो चिन्तन ! एउटा परिवार अनि समाज यस्तो । जहाँ ५, ६ वर्षको उमेरदेखि हो अब चिया, खाजा र खाना आफै बनाएर (पकाएर) खान सिक्नुपर्छ, घरमा पहुनापात टार्नुपर्छ, घर सफा–सुग्घर राख्नुपर्छ यस्तै, यस्तै । यो त सुखको कुरा भो, त्यही कालमै हो अथवा यो भन्दा अघिल्लो पुस्ताको कुरा, दुधे दाँत साटिदा–नसाटिदै अर्काको अर्मपर्म । यतिमात्रै होइन, धनी, हुनेखानेको घरमा काम गर्न बस्नुपर्ने । बिहीबार, साउन १४, २०७८
आमाबाबाको दोस्रो रूप ‘गुरु’ भनिन्छ, हाम्रो जीवनको सबैभन्दा पहिलो पाठशाला घर अनि हाम्रो पहिलो गुरु हाम्रो बाबा अनि आमा । मन्दिर भनेर बनाईन्छ, भगवान भनेर पुजिन्छ तर आफ्नो घर भन्दा ठूलो मठमन्दिर अनि बाबाआमा र गुरु भन्दा ठूलो कुनै भगवान हुन सक्दैनन् । मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा प्रिय शब्द गुरु । म आफूले आफूलाई त्यति विशेष मान्दिन होला सायद जति विशेष म गुरु शब्दलाई मान्छु । गुरु शब्द दुईवटा अक्षर मिलेर बनेको छ जसमा गुु को अर्थ अन्धकार र रुु को अर्थ हो प्रकाश । शनिबार, साउन ९, २०७८
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको मार्गदर्शन अनगिन्ती चुनौती, जोखिम, निराशा र आशा पार गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । आइतबार, असार २०, २०७८
नर्सिङ पेशा : अवसर र चुनौती नर्सिङ पेशा एक महान पेशा हो । नर्सिङ भनेको त्यो पेशा हो जसले व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उपचार गर्ने रोगबाट बचाउ“ने र पुनस्थापना गर्ने कार्य गर्दछ । दिन रात नभनी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै प्राप्त गरेर विरामीको सेवामा तल्लीन हुने लाई एक महान नर्स भनिन्छ । नर्सिङ पेशालाई ङ्खलोरेन्स नाइटिङ्गलले जन्मदिएकी हुन् जुन दोस्रो विश्व युद्धमा घाइते सिपाहीको सेवा गरी रोग र पिडाबाट मुक्त गराउन सहयोग गरेकाले नर्सिङ पेशाको जन्म भएको मानिन्छ । आइतबार, जेठ ३०, २०७८
मन्त्री पार्वत गुरुङको स्मृतिमा ‘पशुपति चौंलागाई’ भनिन्छ– मुत्यु दुईप्रकारका हुन्छन् । पहाडभन्दा गह्रुँगो र प्वाँखभन्दा हलुङ्गो । सिङ्गो जीवन नेपाली वाम आन्दोलनप्रति समर्पित गर्नुभएका पशुपति चौलागाईको महाप्रस्थान साँच्चिकै पहाडभन्दा गह्रुँगो साबित भयो । उहाँको अवसानबाट हजारौँजन शोकमग्न बने । फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्मान र श्रद्धाका शब्दले रङ्गिए । मिडियामा शोक–सन्तप्त समाचार छाए । आइतबार, जेठ ९, २०७८
यस्तो छ, मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको वहुदलीय जनवाद (पूर्णपाठ) काठमाडौं - नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका चर्चित नाम हो मदन भण्डारी । उनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेकपा एमालेभित्र ठुलो बैचारिक एवं सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । जवजको सारतत्वबारे कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच मतभेद रहेपनि आधारभुत रुपमा यसलाई धेरैले स्वीकार गरेका छन् । आखिर जबज के हो ? जबजभित्र के के कुरा छन् ? सोमबार, जेठ ३, २०७८
एमाले अन्य पक्षलाई समेत समेटेर झन् सुदृढ र शक्तिशाली बन्छ (अन्तर्वार्ता) काठमाण्डौं - नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव पक्ष आ–आफ्नो अडानमा यथावत छन् । माधव समुहले समानान्तर गतिविधि जारी राखेपछि एमालेपनि सग्लो रहँदैन की भन्ने आशंका व्यक्त भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट एमालेका एकजना प्रभावशाली नेता वाग्मती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल भने केही नेताहरु एमाले कमजोर बनाउने खेलमा लागेपनि जिल्ला र स्थानीय तहमा एमाले एकढिक्का रहने दावी गर्छन् । माओवादी केन्द्रको ठुलो पंक्तिसहित एमाले थप सुदृढ र पुर्नसंगठित हुने उनको विस्वास छ आइतबार, वैशाख १९, २०७८
किन बिसर्जनतिर जाँदैछ, माओवादी आन्दोलन ? माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई माओत्सेतुङले चीनमा आफ्नो बिशिष्टता अनुसार प्रयोग गरेर एउटा राजनीतिक क्रान्ति सफल पार्नुभयो । चिनियाँ क्रान्ति र त्यतिबेला प्रतिपादन गरिएको विचार र कार्यदिशाका सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठुलो बहस भयो । धेरै कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसलाई माओ विचारधाराका रुपमा सश्लेषण गरे । पेरुमा गोञ्जालेले पहिलो पटक माओवादको रुपमा स्वीकार गरेर आन्दोलन अघि बढाए । मंगलबार, वैशाख १४, २०७८
केपी ओली, प्रचण्ड, योगेश र घनश्यामहरुले यी दर्जनौं प्रश्नहरुको उत्तर देलान ? ७० वर्षको सपना पुरा गर्न गरिएको जनताको आग्रहलाइ किन लत्याइयो ? जीवनभर बोकेको आदर्शको झण्डा आदर्शलाई ब्यबहारमा रूपान्तरण गर्ने बेलामा रद्दीको टोकरीमा किन फालियो? यो आदर्शको झण्डा यो उचाइमा उठाउन कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको थोरै योगदान छैन । वहाँहरू लगायत थुप्रै नेता कार्यकर्ताको योगदानबाट हासिल भएको थियो । हजारौंको बलिदान भयो । लाखौं बेघरबार भए । हजारौं अपाङ्ग बन्न पर्यो । यी तथ्यहरू बिगतका कुरा थिएनन् वा ईतिहासका कुरा हैन जुन जिवित सत्य तथ्य हो । सोमबार, मंसिर २२, २०७७
नेकपा संकटबारे नारायकाजीको बिचार : पार्टी एकता किन, केका लागि र कता जाने ? २०७४ असोज १७ गते हाम्रा तात्कालिन पार्टीहरु ने. क. पा. (माओवादी केन्द्र) र ने। क। पा। ९एमाले० ले २०७४ मंसिरको आम चुनावमा मिलेर लड्ने र अन्ततः निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका थियौँ । बिहीबार, मंसिर १८, २०७७